Wershad Qalajiyaha Bacriminta & Qaboojiyaha | Shiinaha Qallajiye Qalajiyaha & Qaboojiyaha Taxanaha Soosaarayaasha, Alaab-qeybiyeyaal
Ku Aruuriyaha Boorka Duufaanta waxay quseysaa ka saarida boodh aan muuqaal lahayn iyo mid aan fiiq lahayn, badankoodna waxaa loo isticmaalaa in laga saaro jajabyada kor ku xusan 5 mu m, iyo aaladda isku-darka boodhka aruuriyaha boodhka isku-dhafan ee isku-dhafan ayaa leh 80 ~ 85% waxtarka ka-qaadista boodhka walxaha 3 mu m.
Heerkulka Sare ee Warshadaha oo Qabsaday Fan Fan guud ahaan waxaa loo isticmaalaa foornooyinka been abuurka ah iyo hawo qasabka leh ee cadaadiska saarta. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa in lagu qaado hawo kulul iyo gaasas aan wax duminayn, aan iska badnayn, aan qarax ahayn, aan kacsanayn, oo aan dheg dheg lahayn. Hawada hawadu waxay ku dhex jirtaa dhinaca marwaxada, qaybta u dhiganta jihada foorashana way qaloocan tahay, si gaasku si habsami leh ugu soo geliyo qalabka wax qabadsiiya, qasaaro hawo ahna waa yar tahay. Marawaxadda qaboojiyaha kicisay iyo tuubbada isku xireysa waxay isku mid yihiin qalajiyaha bacriminta granular.
Gubista Dhuxusha Dhaca waa nooc cusub oo ka mid ah qalabka kululaynta foornada, oo leh faa'iidooyinka heerka kuleylka sarreeya, keydinta tamarta iyo ilaalinta deegaanka. Waxay ku habboon tahay dhammaan noocyada foornada kululaynta.